အလှည့်ကျ လူထုတ်ပုံမှာ ဝက်စ်ဟမ်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ထိန်းချုပ်အနိုင်ယူပြီး ဇယားထိပ်က ၁၃ မှတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ စီးတီး – Sports A2Z
အလှည့်ကျ လူထုတ်ပုံမှာ ဝက်စ်ဟမ်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ထိန်းချုပ်အနိုင်ယူပြီး ဇယားထိပ်က ၁၃ မှတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ စီးတီး
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့ ဒီနေ့ပွဲမှာ တိုက်စစ်မှူး ဆာဂျီယို အဂွေရိုကို ထည့်သွင်းလာခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ ကစားသမားတွေထဲက ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား၊ ကန်ဆယ်လို၊ စတာလင်၊ ဂျေဆူးစ်တို့ကို အနားပေးသွားခဲ့တဲ့အတွက် တိုက်စစ်နဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်း အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ရပြီး တောရက်စ်နဲ့ မာရက်ဇ်တို့က ရှေ့မှာ ဦးဆောင်ကစားလာခဲ့ကြပါတယ်။
အလှည့်ကျလူထုတ်ပုံမှာ ဘာနာဒိုနဲ့ ကန်ဆယ်လိုတို့ မပါတဲ့ ကစားကွက်ရဲ့ ချောမွေ့မှုကတော့ သိသာနေခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာမှာ စံချိန်ကောင်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ဖိကစားနေတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းရဲ့ အမြင့်ဘောတွေမှာ ရုန်းကန်နေခဲ့ရသလို အီဒါဆန်နဲ့ စတုန်း၊ ဒီယက်စ်တို့အတွဲ အသည်းအသန် ကာကွယ်နေခဲ့ရပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်မှာတော့ အဂွေရိုက ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါ။
မာရက်ဇ်ရဲ့ တောင်ပံက နေရာယူပုံကို ဝက်စ်ဟမ်းကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်ပေမယ့် ဖယ်ရန် တောရက်စ်နဲ့ အဂွေရိုတို့ကတော့ ဒီဘရိုင်းနားတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်က ဖန်တီးမှုတွေကို သဲထဲရေသွန်ဖြစ်စေပြီး ပထမပိုင်းမှာ ဝက်စ်ဟမ်းဘက်က ဆူးချက်၊ လင်ဂတ်နဲ့ အန်တိုနီယိုတို့ရဲ့ တိုးအားနဲ့ တိုက်စစ်ကတောင် ပိုမိုထိရောက်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပွဲချိန် ၂၉ မိနစ်မှာတော့ ဖရီးကစ်ကနေ ဒီဘရိုင်းနား ရသွားတဲ့ ဘောလုံးကို ကွင်းလယ်ညာယွန်းယွန်းက Deep Cross တင်ပေးတာမှာ လူကျွံထောင်ချောက်ကို ဖောက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ စတုန်းနဲ့ ဒီယက်စ်တို့ ခေါင်းတိုက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ဒီယက်စ်က အပိုင်တိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး စီးတီးတို့ စတင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၃၉ မိနစ်မှာ ချေပဂိုးပြန်ရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းဘက်က တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီယိုရဲ့ ကန်ချက် တိုင်ထိထွက်ခဲ့ပြီး ပထမပိုင်း ပြီးခါနီးမှာတော့ ညာတောင်ပံကနေ နောက်ခံလူ ကူဖယ် အနီးကပ်ချိုးပေးတာကို လင်ဂတ်က ပိတ်သွင်းခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်မတည့်တဲ့ ကန်ချက်ကို အန်တိုနီယိုက ထပ်မံပိတ်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ ပထမပိုင်းမှာ တစ်ဂိုးစီ သရေကျနေခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ စီးတီးတို့ ထိုးဖောက်နေခဲ့ပေမယ့် ဝက်စ်ဟမ်းဘက်က ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၆၁ မိနစ်မှာတော့ အဂွေရိုအစား ဂျေဆူးစ်ကို ထည့်သွင်းခဲ့သလို ၆၅ မိနစ်မှာတော့ တောရက်စ်အစား ဖိုဒန်ကို လူစားလဲခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်က ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၆၈ မိနစ်မှာတော့ ထောင့်ကန်ဘောကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဒီဘရိုင်းနားက ဧရိယာထဲ ချအပေးမှာ မာရက်ဇ်က အတွင်းကို ပြန်ချိုးပေးခဲ့တာကို စတုန်းစ် အနိမ့်ဘောကန်သွင်းခဲ့ရာမှာ ဝက်စ်ဟမ်းဂိုးသမား အငိုက်မိသွားခဲ့လို့ စီးတီးတို့ နှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ ထပ်မံဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခဲ့ကြပြီး ဝက်စ်ဟမ်းရဲ့ အမြင့်ဘောတွေမှာ စီးတီးတို့ တော်တော်လေး ရုန်းကန်နေခဲ့ရသလို အီဒါဆန်နဲ့ ခံစစ်က ဖျက်ထုတ်နေခဲ့ရပြီး ဂိုးရလုနီးပါးအထိ ဧည့်သည်တွေ ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့လို့ ဒီရလဒ်နဲ့ပဲ ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲအနိုင်ကြောင့် မန်ချက်စတာစီးတီးတို့အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ပွဲ ၂၀ ဆက်တိုက် အနိုင်ရခဲ့သလို နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာအတွက်တော့ သူ့ရဲ့ နည်းပြဘဝ ပွဲ ၅၀၀ မြောက်နိုင်ပွဲနဲ့ ဒီအသင်းအတွက် ပွဲ ၂၀၀ မြောက်နိုင်ပွဲစံချိန်တွေကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယားမှာတော့ ဒုတိယနဲ့ တတိယ နေရာတွေက ယူနိုက်တက်နဲ့ လက်စတာတို့တွေ မကန်ခင် ရမှတ် ၆၂ မှတ်နဲ့ ၁၃ မှတ်ဖြတ်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ZAWGYI: မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ ဒီေန႔ပြဲမွာ တိုက္စစ္မႉး ဆာဂ်ီယို အေဂြ႐ိုကို ထည့္သြင္းလာခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ ကစားသမားေတြထဲက ဘာနာဒို ေဆးလ္ဗား၊ ကန္ဆယ္လို၊ စတာလင္၊ ေဂ်ဆူးစ္တို႔ကို အနားေပးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ တိုက္စစ္နဲ႔ ကြင္းလယ္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ရၿပီး ေတာရက္စ္နဲ႔ မာရက္ဇ္တို႔က ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ကစားလာခဲ့ၾကပါတယ္။
အလွည့္က်လူထုတ္ပုံမွာ ဘာနာဒိုနဲ႔ ကန္ဆယ္လိုတို႔ မပါတဲ့ ကစားကြက္ရဲ႕ ေခ်ာေမြ႕မႈကေတာ့ သိသာေနခဲ့ၿပီး မန္ခ်က္စတာမွာ စံခ်ိန္ေကာင္းကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ ဖိကစားေနတဲ့ ဝက္စ္ဟမ္းရဲ႕ အျမင့္ေဘာေတြမွာ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသလို အီဒါဆန္နဲ႔ စတုန္း၊ ဒီယက္စ္တို႔အတြဲ အသည္းအသန္ ကာကြယ္ေနခဲ့ရၿပီး တန္ျပန္တိုက္စစ္မွာေတာ့ အေဂြ႐ိုက ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တာပါ။
မာရက္ဇ္ရဲ႕ ေတာင္ပံက ေနရာယူပုံကို ဝက္စ္ဟမ္းကို ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပးႏိုင္ေပမယ့္ ဖယ္ရန္ ေတာရက္စ္နဲ႔ အေဂြ႐ိုတို႔ကေတာ့ ဒီဘ႐ိုင္းနားတို႔ရဲ႕ ကြင္းလယ္က ဖန္တီးမႈေတြကို သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ေစၿပီး ပထမပိုင္းမွာ ဝက္စ္ဟမ္းဘက္က ဆူးခ်က္၊ လင္ဂတ္နဲ႔ အန္တိုနီယိုတို႔ရဲ႕ တိုးအားနဲ႔ တိုက္စစ္ကေတာင္ ပိုမိုထိေရာက္တာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပြဲခ်ိန္ ၂၉ မိနစ္မွာေတာ့ ဖရီးကစ္ကေန ဒီဘ႐ိုင္းနား ရသြားတဲ့ ေဘာလုံးကို ကြင္းလယ္ညာယြန္းယြန္းက Deep Cross တင္ေပးတာမွာ လူကြၽံေထာင္ေခ်ာက္ကို ေဖာက္ထြက္သြားခဲ့တဲ့ စတုန္းနဲ႔ ဒီယက္စ္တို႔ ေခါင္းတိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ဒီယက္စ္က အပိုင္တိုက္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး စီးတီးတို႔ စတင္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၃၉ မိနစ္မွာ ေခ်ပဂိုးျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဝက္စ္ဟမ္းဘက္က တိုက္စစ္မႉး အန္တိုနီယိုရဲ႕ ကန္ခ်က္ တိုင္ထိထြက္ခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္း ၿပီးခါနီးမွာေတာ့ ညာေတာင္ပံကေန ေနာက္ခံလူ ကူဖယ္ အနီးကပ္ခ်ိဳးေပးတာကို လင္ဂတ္က ပိတ္သြင္းခဲ့ၿပီး ဂိုးေပါက္မတည့္တဲ့ ကန္ခ်က္ကို အန္တိုနီယိုက ထပ္မံပိတ္သြင္းႏိုင္ခဲ့လို႔ ပထမပိုင္းမွာ တစ္ဂိုးစီ သေရက်ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ စီးတီးတို႔ ထိုးေဖာက္ေနခဲ့ေပမယ့္ ဝက္စ္ဟမ္းဘက္က ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၆၁ မိနစ္မွာေတာ့ အေဂြ႐ိုအစား ေဂ်ဆူးစ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သလို ၆၅ မိနစ္မွာေတာ့ ေတာရက္စ္အစား ဖိုဒန္ကို လူစားလဲခဲ့ၿပီး အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္က ပိုေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၆၈ မိနစ္မွာေတာ့ ေထာင့္ကန္ေဘာကေန ျပန္ထြက္လာတဲ့ ေဘာလုံးကို ဒီဘ႐ိုင္းနားက ဧရိယာထဲ ခ်အေပးမွာ မာရက္ဇ္က အတြင္းကို ျပန္ခ်ိဳးေပးခဲ့တာကို စတုန္းစ္ အနိမ့္ေဘာကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ဝက္စ္ဟမ္းဂိုးသမား အငိုက္မိသြားခဲ့လို႔ စီးတီးတို႔ ႏွစ္ဂိုး-တစ္ဂိုးနဲ႔ ထပ္မံဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။
ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ တိုက္စစ္ဖြင့္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ဝက္စ္ဟမ္းရဲ႕ အျမင့္ေဘာေတြမွာ စီးတီးတို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသလို အီဒါဆန္နဲ႔ ခံစစ္က ဖ်က္ထုတ္ေနခဲ့ရၿပီး ဂိုးရလုနီးပါးအထိ ဧည့္သည္ေတြ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အဆုံးသတ္ပိုင္းမွာ အားနည္းခဲ့လို႔ ဒီရလဒ္နဲ႔ပဲ ပြဲၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။
ဒီပြဲအႏိုင္ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးတို႔အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲစုံမွာ ပြဲ ၂၀ ဆက္တိုက္ အႏိုင္ရခဲ့သလို နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာအတြက္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ နည္းျပဘဝ ပြဲ ၅၀၀ ေျမာက္ႏိုင္ပြဲနဲ႔ ဒီအသင္းအတြက္ ပြဲ ၂၀၀ ေျမာက္ႏိုင္ပြဲစံခ်ိန္ေတြကို ရယူသြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးဇယားမွာေတာ့ ဒုတိယနဲ႔ တတိယ ေနရာေတြက ယူႏိုက္တက္နဲ႔ လက္စတာတို႔ေတြ မကန္ခင္ ရမွတ္ ၆၂ မွတ္နဲ႔ ၁၃ မွတ္ျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
စူပါကွန်ပျူတာရဲ့တွက်ချက်မှုမှာ ထိပ်ဆုံးလေးနေရာနဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
27 Feb နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု
အပြစ်ပေးကြမ်းတဲ့ ဂျိုတာနဲ့ လီဗာပူးလ် 4-0 စိန့်ပွဲအပြီး...
လူငယ်တွေ ရုန်းခဲ့ကြတဲ့ အာဆင်နယ် 2-0...
Bundesliga • La Liga • Ligue1 • Premier League • Serie A
ပရိသတ်တွေမဲပေးရွေးချယ်တဲ့ ဘလွန်ဒေါဆုမှာ တတိယနေရာပဲ...
အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာပေမယ့် CR7 မက်ဆီတို့နဲ့ မတူ...
Copyright © 2021. Created by Sports A2Z.